Fanandramana penina mifandraika amin'ny algorithm RANSAC | Famoronana an-tserasera
Ny algorithm RANSAC amin'ny andrana penina
Tsipika sy tsipika hafa mba hamolavolana tsikelikely ny sarin'ny maso izay, rehefa mijery azy lavitra na manalavitra, dia afaka mahita ny fomba nanjary mazava kokoa ilay manga. Ankoatr'izay dia miloko amina vondrona sary marobe miaraka amin'ny feony maivana kokoa.
Ny zavatra mahaliana amin'ity fanandramana natao tamin'ny penina ity dia misy fomba iray hamoronana an'io vokatra io nomerika amin'ny alàlan'ny fanarahana ireo tangentsin'ny fiolahana amin'ny endrik'ilay maso na amin'ilay zavatra tadiavintsika hisolo tena. Tolo-kevitra mahaliana avy amina mpanakanto tsy fantatra anarana ao amin'ny tranonkala izay mety tsara amin'ny fahafantarana ny algorithm RANSAC.
Ny dingan'ny ataovy amin'ny nomerika azo fintina toy ny:
Avadiho ho mainty sy fotsy ny sary
Mamorona lamba malalaka
Manaova tsipika tokana amin'ny kopian'ny lamba vitsivitsy
Kajy ny maha samy hafa ny tany am-boalohany sy ny canvases
Raiso ny iray misy fahasamihafana kely indrindra
Ny dingana dia averina avy amin'ny dingana telo manodidina ny arivo
Vita tanteraka, tokony hataontsika in-jato eo ho eo izany ary farany hifantina ny sary izay maka tahaka indrindra ilay maodely izay nampiasaintsika. Mety ho somary mankaleo ihany izany, fa hamonjy ny tenantsika kosa isika tsy maintsy manintona azy amin'ny tanany tahaka ny nitranga tamin'ny fanandramana zarainay eto. ENY te-hamonjy ny fizotrany ianao, Avia aty Eto.
Farany dia miresaka momba ilay algorithm RANSAC izay izahay navoakan'i Fischler sy Bolles tamin'ny 1981 ary izany nanomboka teo dia nampiharina tamin'ny famakafakana sary. RANSAC dia manana fahaizana mahatalanjona manome fitadiavana sahaza avy amin'ny angona voapoizina miaraka amin'ny ampahany betsaka amin'ny ivelany, eny mihoatra ny 50 isan-jato aza, izay fetra tsy azo resena ho an'ireo teknika fanombanana matanjaka.
Ny algorithm mitady ny maodely tsara indrindra mandinika ireo piksely rehetra momba ny contour anisan'izany ireo izay tsy mifanaraka amin'ilay maodely tadiavina. Mifantina tsy tapaka ny santionan'ny s amin'ireo teboka, izay misy ny teboka ilaina hametrahana ireo masontsivana modely.
Una tolo-kevitra famoronana mahaliana ho fanandramana. Raha te hahafantatra iray hafa ianao, vao herintaona lasa izay no navoakanay iray natao tamin'ny CSS3D HTML5.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Inspiration » Ny algorithm RANSAC amin'ny andrana penina
Namboarin'ireo mpanakanto ny efitrano malaza an'i Van Gogh ao Arles
+ Freebies 20 ho an'ny fetin'ny mpifankatia 2016